Ingadi. La Candelaria
Itholakala e-La Candelaria, isikhungo somlando nesivakashi sase-Bogotá, endlini yamakoloni esanda kulungiswa engu-300 m2 eguqulwe yaba amafulethi ama-2 ahlanganyela isango lokungena kanye nevulandi elimaphakathi. Izikhiye zomnyango omkhulu wendlu kanye nefulethi ziyanikezwa. Isidlo sasekuseni esimnandi sifakiwe, ukuze usilungiselele uwedwa. Bangaphinde bajabulele ihostela lami le-Botanical elisekhoneni noma nini lapho befuna, indawo yayo yokudlela kanye nethala elinokubukwa kwedolobha lonke, amakilasi e-yoga nokunye.
Lesi sikhala sifana nokuba sepulazini lamakholoni, ngaphandle kwedolobha, lapho igumbi elikhulu - igumbi lokuphumula, ikhishi - igumbi lokudlela kanye negumbi lokugezela lixhunyaniswa ne-corridor phambi kwe-patio ephakathi yendlu. Indawo ikhethekile, umbono we-Monserrate uyamangalisa futhi izinsiza ozithola eHostela Lezitshalo, eliqhele ngamamitha angu-80, zenza okuhlangenwe nakho kwakho kuhluke futhi ungakhohlwa.
Banezinsizakalo ngendawo yokuhlala yezivakashi enobumfihlo be-Apartment.
4.89(64 okushiwo abanye)
4.89 · 64 okushiwo abanye
Kule ndawo kunamamnyuziyamu angama-80% edolobheni, iyisikhungo somlando nesokuvakasha saseBogotá, lapho kukhona namanyuvesi, amabha kanye nezindawo zokudlela. Indawo eyodwa iyindawo edume kakhulu yezindawo zokudlela ezivelele e-La Candelaria, lapho ufika sizokunikeza imephu eneziphakamiso zethu kanye nezindawo eziheha izivakashi ezinkulu, ehostela lami le-Botanical elisemgwaqweni ofanayo kumamitha angu-80 ungakwazi futhi ukuhlela. amakilasi yoga, salsa, ukuvakasha kanye neminye imisebenzi ukuthi bafuna emaqenjini noma yangasese namakheli zokudla, amakilasi kanye nezinsizakalo.
Ngizobe nginakekela izidingo zakho ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb futhi ehostela lamahora angu-24 uzokwazi futhi ukujabulela ukunakwa komuntu siqu ngenkonzo yakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bogotá namaphethelo